Mashiinka Mashiinka / Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka - Shiinaha Qaybaha Mashiinka / Soosaarayaasha Mashiinka Mashiinka, Qaybiyeyaasha
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka 'CNC Oscillating' oo loogu talagalay Iibinta 2021 SOO iibinta HOT
1625 mashiinka goynta mindi wareegsan oo leh quudin otomaatig ah oo shaqeynaya, kuna qalabeysan mindiyo laba-mid ah feer iyo mid goynta (qaabab kala duwan). Sida quudinta otomaatiga ah ee shaqeynaya, sidaas darteed waxay badbaadin kartaa kharash badan oo shaqaale ah. Ka sokow, oo lagu qalabeeyo nidaamka leexashada otomaatigga ah, waxay kaa caawin kartaa in lagu sii wado saxsanaanta shaqada, si weyn kor loogu qaado waxtarka. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay fadhiga, daahyada, dharka miiska iwm.
Qaabka jarista mindida ayaa ku habboon in dheelitirka ka dhexeeyo wasakhda laga dhigo mid xor ah, oo aan lahayn jawi shaqo oo ur leh, kor u qaadista awoodda wax soo saarka, keydinta kharashka shaqaalaha iyo kharashka wax ku oolka ah. Iyada oo la adeegsanayo waxqabadka goynta jilicsan ee joogtada ah, jilicsanaanta sare, korantada korantada iyo qiimaha macquulka ah, xallinta mindida xallinta dawaarrada bilaashka ah ee soosaarida iyo soosaarida gaaban.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Loogu Talo Galay
Nidaamka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka CNC
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee CNC oo leh Pneumatic Oscillating Knife Cutter for sale